Xarfaha Jarmalka, Xarfaha Jarmalka, Das Deutsche Alphabet
Casharkeena Alphabet-ka Jarmalka, waxaan ku baari doonaa xarfaha jarmalka, inta aan baareyno xarfaha jarmalka, waxaan sidoo kale ku baran doonaa ku dhawaaqida xarfaha alifbeetada Jarmal sida warqad madax banaan iyo sida loogu dhawaaqo erayga. Alifbeetada Jarmalka i.e. das Deutsche Alphabet Muxaadarooyinka aad bay muhiim u tahay gaar ahaan kuwa bilowga ah ee barashada Jarmalka, waa in si taxadar leh loo darso.
Dhanka kale, waxaan arki doonaa ku dhawaaqida ku soo biirtay xarfaha Jarmalka qaarkood, Waxaan arki doonaa warqado Jarmal ah oo aan ku qornayn Turkiga, iyo warqado Turki ah oo aan Jarmal ahayn., waxaan ku xoojin doonaa wixii aan u sheegnay tusaalooyin ugu dambeyntiina waxaan mawduuceena ku dhameyn doonaa imtixaanka maadada alifbeetada Jarmalka.
Waqtiga uu ka baxayo Jarmal Jarmal: Min 20 daqiiqo
Waayo: Ardayda dugsiyada hoose iyo sare, 9. Fasalka Ardayda, Bilowga Jarmalka
Ka dib markii si taxadar leh dib loogu eego alifbeetada Jarmalka, waxaan kugula talineynaa in aad ku xalisid imtixaanka yar-yar ee dhamaadka booskaaga.
Marka hore aan isla aragno xarfaha alifbeetada jarmalka oo wadajir miis wada jir ah, ka dibna aan mid mid u baarno xarfaha. Alifbeetada Jarmalka waxaa ku jira 30 xaraf oo ay la socdaan xarfo gaar ah. Alifbeetada Jarmalka waxaa ku jira 26 xaraf iyo 4 xaraf oo gaar ah.
a: aa g: ge m: em r: er w: anaga
b: noqo h: ha n: in s: es x: ix
c: se i: ii o: oo ah t: te y: üpsilont
d: ka j: yot öooo ah u: uu z: deji
e: ee k: ka p: pe ü: dhogorta ä: ae
f: ef l: gacanta q: qu v: fau ß: u dhig
Si taxaddar leh u baar labada xarfaha yaryar iyo kuwa waaweyn ee alifbeetada Jarmal sawirka alifbeetada Jarmal ee hoose.
Xarfaha Jarmal - Waraaqaha Jarmalka
Jarmalka waxa ku jira 26 xaraf iyo 4 xaraf oo gaar ah. jilayaashan gaarka ah Jilayaasha Ä, Ö iyo Ü waa foomamka xarfaha A, O iyo U. Guud ahaan, laguma muujiyo alifbeetada, si gaar ah ayaa loo muujiyaa.
Xarafka ß (estset) sidoo kale waxaa loola jeedaa double s. Waxaa sidoo kale la arkaa in SS (double s) la qoro halkii warqadan meelaha qaarkood. Xarafka ß had iyo jeer waxaa lagu qoraa xuruuf yar, haddii loo baahdo caasimadaha, waxaa loo qoraa SS. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato dhammaan xarfaha erey oo ay ku dhex qoran tahay xarafka,, xarafka ß waa in loo qoraa SS.
Xarafka kore ee xarafka i ee Jarmalka waa xarafka I, ma aha xarafka I. Xarafka weyn (i) waxaa laga helaa luuqada Turkiga laakiin kuma qorna Jarmal. Waxa kale oo jira warqad yar oo aan ku qoro afka Turkiga laakiin aan ku qorneyn Jarmal. Jarmal ahaan, sida Ingiriisiga, xarafka R guud ahaan laguma sheegin cadaadis aad u sarreeya.
Akhrinta iyo Codeynta Warqadaha ee Almanci
Fiiri sawirka aan kuu diyaarinay.
Hadda waxaan ku aragnaa xarfaha alfablaha Jarmalka, hal mid:
o: oo ah
Laga soo bilaabo:
Waraaqaha ku qoran alifbeerka Jarmalka waa la akhriyaa oo loo calaameeyay sida kor ku xusan.
Haddii qof doonayo in aad magacaaga ku qorto, waxaad u baahan tahay inaad xarfaha ku qorto magacaaga hal mid.
Waxaan dhahnay inaysan jirin xarfo Ç, Ğ, İ, are alifbeetada Jarmalka. Haddii ay jirto warqad magacaaga ku qoran oo aan ku qorin alifbeetada Jarmalka, sida Ç-Ğ-Ş, sida tusaalooyinka MODERN, YAĞMUR, ĞAĞLA, xarfahan waxaa lagu calaamadeeyay Jarmal aan dhibco lahayn Marka waxaad u baahan tahay inaad u calaamadeyso xarafka Ç sida C, Ğ sida G, iyo Ş sida S.
Warqad Jarmal Jarmal ah
Waraaqaha ku qoran Alphabet Germany ee aan ku jirin alifbeetada Turkiga
Waxay ku taallaa ee alifbeetada Jarmal, Q, W, X, SSA kajirin in xarfaha alifbeetada Turkish.
Alphabet Non Alphabet ee Alphabet Turkish
Ku taalla alifbeetada Turkish in O ka alifbeetada Jarmal, G, S, I, waxaan jeclaan xarfaha ka jira xarfaha Jarmal.
Erayada Ereyga Jarmalka
Qaar ka mid ah waraaqaha waxaa loo isticmaalaa dhinac dhinac ahaan ereyga iyo guud ahaan akhriska soo socda ayaa loo isticmaalaa:
ei : haddii e iyo aniguba dhinac u nahay ay akhri sida
ie : haddii aniga iyo e ay dhinac u yihiin i akhri sida
eu : Haddii e iyo u yihiin dhinac dhinac oy akhri sida
sch : Haddii warqada s, warqadda c, iyo warqadda h ay isu yimaadaan ş akhri sida
ch : Haddii c iyo h waa dhinac dhinac ah h akhri sida
z : z ereyga ts akhri sida
au : haddii a iyo u yihiin dhinac dhinac o akhri sida
ph : Haddii p iyo h ay dhinac u yihiin f akhri sida
sp : Haddii s iyo p yihiin dhinac dhinac pankreatit daran akhri sida
st : Haddii s iyo t waa dhinac dhinac ah PIB akhri sida
s : s waa meesha ugu sareysa ee koolka z dhamaadka, sida s akhri sida
ugu yaraan qaar ka reeban sharciga kor ku qoran waa akhriska, inkastoo qaar ka mid ah erayada in waraaqahaas helay Isu dhowayna waraaqaha kala duwan ee erayada loogu dhawaaqaa by bilowgii ama waxaa loo soo afjaro.
Sawirka soo socda, xarfaha qaarkood ayaa lagu muujiyaa dhinaca dhinac si ay u muujiyaan sida erayada loo akhriyo.
Sida loo akhriyo erayada Jarmalka?
Sida loo Aqriyo Waraaqaha Jarmalka
Fiiro gaar ah: alfablaha Jarmalka ä, ü, ö xarfaha (AUO) waa qaabka waraaqaha ka soo baxa miisaanka (dhibic).
Saaxiibada aan haysan calaamado gaar ah oo ku jira kumbuyuutarkooda waxay ku qori karaan waraaqaha kombiyuutarkooda iyaga oo isticmaalaya isugeynta muhiimka ah ee soo socda.
ä caan: ALT + 132 (Alt + 132 waxaa loola jeedaa in la qoro 132 adigoo riixaya Fur subkan)
ß calaamadda ALT + 225
Qalabkeena aan ahayn Turkiga wuxuu sidoo kale soo jiidi karaa jilayaasha Turkiga sida soo socota:
Anigu: ALT + 0253
Anigu: ALT + 0221
Shaqada: ALT + 0222
Mawduucayada alifbeetada Jarmalku waa tan hadda, asxaabta qaaliga ah. Markaad si fiican u barato xarfaha jarmalka, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u xifdiso xarfaha, baro ku dhawaaqida xarfaha jarmalka iyo gaar ahaan ku dhawaaqida marka xarfaha qaar ay isugu yimaadaan af Jarmal. Ka dib markaad barato xarfaha Jarmalka, waxaad sii wadi kartaa casharro kale.
Waad ku qori kartaa wixii su'aalo iyo faallooyin ah ee ku saabsan casharradeenna Jarmal ee ku saabsan barxadaha almancax ama qaybta faallooyinka ee hoose Su'aalahaaga oo dhan waxaa ka jawaabi doona macallimiinta almancax.
Saaxiibbo qaali ah, Ku aadida golaha Jarmalka Xubin ahaan waxaad sidoo kale wadaagi kartaa macluumaad kasta oo ku saabsan Jarmal.
Hadda waxaad ogtahay alifbeeriyada Jarmalka, Arjiga jarmalka ee jaamicadda Waxaad fiirin kartaa casharkayaga.
Haddii aadan garanaynin amarkaa waxaad raaci doontaa casharrada Jarmalka, Mawduuca JarmalkaWaad hubin kartaa our. Waa suurtogal inaad u raacdo casharrada Jarmalka tallaabo-tallaabo sidatan. Waxaad qaaday talaabadii ugu horaysay ee barashada jarmalka.
Kooxda almancax waxay rajeynayaan guul ...
# GERMAN ALPHABET (DAS DEUTSCHE ALPHABET)
# Akhrinta iyo Codeynta Warqadaha ee Almanci
# Waraaqaha Jarmalka
# Warqad Jarmal Jarmal ah
# Waraaqaha ku qoran Alphabet Germany ee aan ku jirin alifbeetada Turkiga
# Alphabet Non Alphabet ee Alphabet Turkish
# Erayada Ereyga Jarmalka
# Sida loo akhriyo erayada Jarmalka?
Tags: Alifbeetada jarmalka fasalka 10aad, 10. fasalka nasiibka mawduuca, Alifbeetada jarmalka fasalka 9aad, 9. fasalka nasiibka mawduuca, alfabaha jarmalka, german abc, alfabaha jarmalka, alfabaha jarmalka, waraaqaha german, ku dhawaaqida xarfaha jarmalka